Nezvedu - Kingtai Craft Zvigadzirwa Co, Ltd.
Kingtai Craft Zvigadzirwa Co, Ltd.
Kingtai chigadzirwa chigadzirwa chakashomeka kambani, iyo china inozivikanwa simbi yekugadzira michina, iyo inobata makore anopfuura makumi maviri akasiyana emhizha ekugadzira zviitiko, kubatanidzwa kwayo kwakazara kweindasitiri nekambani yekutengesa, nekudaro isu tine ese akakura dhizaini boka uye bhizinesi timu.
Kubva payakatanga, Iwo marezinesi uye patent yatakatora inodarika zvidimbu makumi matatu, akati wandei anoti Disney, Wal-Mart, Harry potter, Universal Studio, SGS, FDA uye ISO9001.
Isu tinopa mhando pop zvigadzirwa zvetsika, zvinosanganisira machena, menduru, pini bheji, magetsi, chiyero chechipunu uye nezvimwe. Tinogona kuchinjika pane rako bhizinesi zvido uye nekugadzira zvigadzirwa zvinoenderana neyako yakagadzirirwa mifananidzo, yakajairwa masampuli, uye zvakadzama zvinodiwa.
Pamusoro pegumi, isu takave mutengesi kuDisney, Wal-Mart, Harry Potter uye Universal 'Studios, Isu tinotengesa zvigadzirwa zvedu zvakananga kuzvitoro uye kutengesera kubhizimusi kutenderera pasirese, yedu hombe renji haimbokundikana kugutsa vatengi vedu zvido uye iri kugara ichivandudzwa kuti ibatanidze kufambira mberi kwazvino muindastiri yezvigadzirwa.
KingTai yanhasi iri kushanda nevatengi-yekutanga chinangwa chebasa, uye yatora chikamu muCanton Fair neHong Kong Exhibition kwemakore mazhinji. Isu Tinopa basa rechokwadi kune vatengi, uye tinoramba tichivandudza nekutenda kwezvinhu zvakasikwa zvehupenyu
Saka wadii kutiyedza? Tine chivimbo chekuti tichakwanisa kusangana nekupfuura zvese zvaunotarisira.
Ndezvipi zvimwe zvatingaite neako logo?
Isu tinopa akasiyana akasiyana emhando yepamusoro tsika enamel lapel pini uye dijitari yekudhinda mapini nekukurumidza kutendeuka. Dhizaina ako enamel pini nemalogo kana kuenda echinyakare nemakore ebasa. Nedu Pantone color inoenderana chishandiso, isu tinoona yako dhizaini ichibuda neayo chaiwo mavara iwe awaifungidzira.
Enamel pini dzinogona kupihwa kuvashandi kuratidza kuzivikanwa kana kune vanozvipira kuratidza kutenda kwako. Yedu tsika zvigadzirwa zvinogadzikana zvakanyanya neishongo-senge mhando, yakakwana kupa sechipo kana brand kambani yako. Ratidza yako USA kudada needu maAmerican Mepini pini. Unoda kuparadzira ruzivo? Isu tinopa akakodzera kufa akarova Kuzivisa Ribhoni pini, iyo inogona kuve yakagadzirirwa neako wega wakasarudzika meseji.
Neyako dhizaini, iwe unogona kuwana dzakasiyana siyana dzemhando yepamusoro zvigadzirwa neyako odha. Kubva pamakiyi, mazango, uye cufflinks kune mhete, imbwa mateki, mabhandi mabhandi, uye medallion, isu tine mhinduro kune ako ese ekushambadzira kana mubairo zvido.
Tsika pini dzinodhura uye zviri nyore kugadzira. Idzi inzira huru yekupa mubayiro vashandi, vanozvipira uye vadzidzi, kuratidzira kambani yako ine logo, farira timu yako yemitambo, kusimudzira kirabhu yako, uye kukudza veterans! Mireza yedu pini yakagadzirwa nekuzvikudza muCHINA Tarisa mifananidzo yedu yemifananidzo kuti ifuridzirwe yako yakasikwa yakasikwa.